landa u-당연시 - 당신도 연애를 시작할 때♡, 미팅/소개팅/동네 친구 찾기 ngu-BNKLAB apk yakamuva kakhulu app yamadivayisi we-android
당연시 - 당신도 연애를 시작할 때♡, 미팅/소개팅/동네 친구 찾기
Izingeniso ezintsha eziyi-16 zansuku zonke mahhala, Thola abangane kuChimac, Hunnam Hunma Nsuku zonke behlanganyela ngenkuthalo efanele
Khipha I-Apk (34.67 MB)
Jabulela ingilazi kabhiya usendleleni ekhaya usuka emsebenzini, bese uthola abangane endaweni yangakini abafuna ukwaba izimpilo zabo zansuku zonke!
Uhlelo lokusebenza olunyanzelekile ukuncoma uHunnam Hunna ufuna ukuhlangana!
Izinsuku ezintsha eziyi-16 zezimpumputhe nsuku zonke, "kunjalo" [Yebo sebenzisa amaphuzu!] 1.
Ungaphunyuka kanjani ngokushesha udubule?
Usuku lonke ngo-8:00 ekuseni, abantu banamuhla abangu-16 kanye nosuku lwezimpumputhe olukhathazayo!
-Siyini isizathu sakho osithandayo?
Khetha noma uveze ingqondo yakho ngokufaka isicelo kumngane wengxoxo!
-Uma elinye iqembu lingikhetha nami, lo mbhangqwana uyaphumelela!
(Ekugcineni imibhangqwana exhunyiwe ingasebenzisa ingosi yokuxoxa ukuxhuma).
Uma ukhathele nge-1: 1 date blind? 3: 3 Ukuhlangana-Isikhathi sangempela somhlangano ukuze uxhumane nabantu abaxhunyiwe manje!
-Bheka iphrofayili enengqondo bese ukhetha isilinganiso esiphikisayo osithandayo!
(Abantu abathathu bangakhetha abathathu uma bethanda!) 3.
Isizathu sesikhathi sangempela-Isikhathi sangempela sokuthi ungahlangana nesizathu esingenamkhawulo manje esixhunyiwe! -Khetha isizathu esifanele bese uqala ingxoxo ngokushesha okukhulu!
Thola abangane bomakhelwane ongaphumula nabo? Thola abangane abangomakhelwane -Beka abangane bomakhelwane ngohlelo lwangempela olwenzelwe indawo! -Kukhona inothi elitholakala kuphela ngesici se-Thola Abangane:) - Iya ekhaya ngoLwesihlanu, ubhiya olula nomngane osondelene naye
Kanjani? [Ukuqomisana ngendlela yemvelo] igxathu 1. Zonke izinsuku ngo-8: 00 ngeniswa kubantu abangu-16 wosuku bese kubanjwa imiqhudelwano emibili .. Isinyathelo 2. Kumqhudelwano ngamunye, khetha laba bantu bobabili ubulili obuhlukile.
3. Ungathola okuningi mayelana nokubopha kwanamuhla ngokubheka iphrofayili yakho. 4. Uma uzithanda zombili izizathu zomqhudelwano?
Tshela wonke umuntu ngesinyathelo esithi “Khetha Konke” 5. Uma ngabe wenze isinqumo, yisikhathi sokukhetha.
Isinyathelo 6. Ngikhetha abobulili obuhlukile, ungakhuluma.
Khuluma nabobulili obuhlukile bese uqhubeka nobudlelwano bakho obuhle. Isinyathelo 7. Ungadumali ukuthi awukhethiwe.
Ungaphinda uthandeke ngenhliziyo esuka enhliziyweni kungxoxo ye-'xoxo '. Isinyathelo 8. Kuthiwani uma abantu abayi-16 besilela?
Ungaziswa ngesizathu ofuna ngaso 'isingeniso sangokwezifiso' futhi. Ukuphupha uhlobo olufanele ulinde ukhetho lwakho ngokuhamba kwesikhathi manje:) - Lolu hlelo lokusebenza lususelwa ku 'Isincomo sokuqinisa imisebenzi yokuvikela intsha'
Senza konke okusemandleni ukwenqabela umsebenzi ngaphakathi kohlelo futhi siqaphe ukuvikelwa kwentsha.
Ngaphezu kwalokho, sizobheka ukusatshalaliswa kokuqukethwe okungekho emthethweni okungekho emthethweni, futhi uma kutholakala, ilungu / i-athikili lingavinjelwa ngaphandle kwesaziso.
Lolu hlelo lokusebenza aluhloselwe ukushushumbisa ngokocansi, futhi luhambisana noMthetho Wokuvikelwa Kwentsha, kepha lungaqukatha okuyingozi noma okuqukethwe yintsha, ngakho-ke abasebenzisi kudingeka baqaphele.
Noma ngubani olahla, acele, afake noma aphoqe ubufebe, kufaka phakathi izingane nentsha, noma owenza ubufebe, uzohlawuliswa ubugebengu.
Okuthunyelwe okukhuthaza ukuhlangana okungekho emthethweni ngokusebenzisa izithombe eziveza obala noma eziveza ucansi kanye nezenzo zocansi nezocansi akuvunyelwe ukuthi zisatshalaliswe kule nsiza.
-Sinqabela izinto ezingekho emthethweni ezephula umthetho wamanje njengezinye izidakamizwa, umuthi, ukuthengiselana okuhlala isikhathi eside.
Uma kunokuthengiselana okungekho emthethweni, sicela ubike kuyo imibuzo elandelayo yamakhasimende. Uma kwenzeka kuphuthumayo, abakwaNational Police Agency (112), Izingane, Abesifazane, kanye Nezindawo Zokukhubazeka Kwezokuvikela Amaphoyisa Esikhungo Sokuphepha (117), iWomen Emergency Call (1366), kanye nezinye izikhungo zokuvikela udlame oluphathelene nezocansi.
Ungathola usizo ku- (http://www.sexoffender.go.kr/).
[Ukufinyelela Amalungelo Wenkomba] order Ukuze usebenzise kahle, singanikeza amalungelo okufinyelela alandelayo.
-Save: Sebenzisa ukugcina isithombe sephrofayili nokungenisa isithombe kusuka ku-albhamu-Ikhamera: Sebenzisa ukuthwebula isithombe sephrofayela-Indawo: Sebenzisa ukuthola abangane encwadini ebheke kwamakheli: Sebenzisa ukuhlangana nabantu ongabazi *
Kwenziwa ukuhambisana nhlobo olungaphezulu.
Uma usebenzisa inguqulo ephansi kune-6.0, awukwazi ukuvumela okukhethiwe uqobo, ngakho-ke sincoma ukuthi uhlole ukuthi ngabe umenzi wedivaysi yakho uhlinzeka ngomsebenzi wokuthuthukisa we-OS futhi uvuselele ku-6.0 noma ngaphezulu uma kungenzeka.
Ngaphezu kwalokho, noma ngabe uhlelo lokusebenza luthuthukisiwe, amalungelo okufinyelela avumelaniswe izinhlelo zokusebenza ezikhona ngeke aguqulwe. Ngakho-ke, ukuze usethe kabusha amalungelo wokufinyelela, kufanele ususe uphinde ufake izinhlelo zokusebenza esezivele zifakiwe.
Uma uhlelo lokusebenza lungeke luthuthukiselwe ku-6.0 noma ngaphezulu, awukwazi ukukhipha imvume ngawodwana, ngakho-ke uma ungavumelani nemvume, kufanele ushiye insizakalo.Xhumana nathi: [email protected] Imininingwane: Yeoksam, Gangnam-gu, Seoul
13, Ro 3-gil 827047563651
Account Pop Up for Instagram
40 Chat: Chat app for people over 40